Tari-dalana Toriteny Alahady 10 Jolay 2016 (Alahady faha-7 manaraka ny Alahadin’ny Trinité)
Miarahaba antsika rehetra amin’ny anaran’i Jesosy Tompontsika. Indro atolotra anareo indray ny tari-dalana momba ny texte izay hotoriana aminny Alahady faha-10 Jolay 2016 ho avy izao manerana ny sahan’ny FLM. Mirary soa ho antsika rehetra.
Alahady faha-7 manaraka ny Trinite no misy antsika izao. Izany hoe, ao anatin’ny fizaran-taona izay iainan’ny Fiangonana tanteraka amin’ireo vokatry ny asan’Andriamanitra tao amin’ny taonan’Andriamanitra (Krismasy, Paska ary Pentekosta). Ao anatin’izany tontolo izany koa no hanazavantsika ity tenin’Andriamanitra izay anjarantsika ity ka hampitana ny votoatin-kafany ho antsika rehetra.
Samy manana izay kendreny ny mpanoratry ny Filazantsara samihafa, noho izany dia mampiasa izay notenenin’i Jesosy sy nataony mba hifanaraka amin’izany fikendrena teolojika izany izy ireo. Ny namahanan’i Jesosy ny vahoaka maro tamin’ny alalan’ny mofo fito sy hazandrano vitsy ny texte izay anjarantsika eto. Hitantsika koa izany ohatra ao amin’ny Matio 15:32–16:4. Marka manokana dia manindry ny amin’ny fahadiovana izay nanana anjara toerana betsaka teo amin’ny fifandraisana tamin’Andriamanitra teo amin’ny Jiosy. Izy ireo dia nifady izay nampahaloto azy rehetra, toy ny fifampikasohana tamin’ny biby maloto na fihinanana izany (kisoa, biby tsy mivaky kitro, biby sampona, maty ho azy sns…), na ny fifampikasohana tamin’ny olona izay noheveriny fa maloto (olona kilemaina, boka, Jentilisa, mpanota sns…). Ny ideolojia izay nifehy azy tamin’izany dia izao: “Izay miditra ny vavan’ny olona no mahaloto azy”. Noho izany dia nitandrina mafy izy ireo, ka tsy maintsy nisasa tanana vao nisakafo, tsy nihinana izay noheveriny fa maloto ary tsy niara-nisakafo tamin’izay noheveriny fa maloto ihany koa.
Ao amin’ny Filazantsara araka an’i Marka no ahitantsika miharihary ny fihoaran’i Jesosy ny fefy na ny faritry ny Jiosy momba izany fahadiovana izany. Ao koa no ahitantsika ireo fifanoherana samihafa izay nisy teo Aminy sy ireo niara-nihira taminy momba ity fahadiovana ity, toy ny Fariseo, ohatra, izay tena sarotiny tokoa momba ny codes-n’ny Lalàna levitika teo amin’ny fiarahamonina Jiosy. Voalohany dia nikasi-tànana ireo olona izay voarara tsy ho kasihina fa mandoto vokatry ny fifampikasohana Jesosy. An-tsitra-po no nikasihany ilay boka (Mar. 1:40–45). Nokasihiny ihany koa ilay fatin-janaka vavin’i Jairo (Mar. 5:41). Faharoa dia tsy nitandrina ny hoe “izay miditra ny vavan’ny olona dia mahaloto azy” Izy. Niara-nihinana tamin’ny mpanota sy ny mpamory hetra Izy kanefa nandoto izany araka ny codes-n’ny fahadiovana Jiosy (Mar. 2:15). Tsy nahatandrina ny lalàn’ny fanadiovan-tànana mialoha ny sakafo ny mpianany, izay manambara fa tsy nampianatra na nanery ny mpianany hanao izany Izy (Mar. 7:1–2). Niara-nisakafo tamin’ny vahoaka maro tsy nisy fanontaniana momba izay olona tandrify na tsia tokony hiarahana misakafo na tsia koa Izy sy ny Mpianany. Tamin’ny Jiosy dia ny olona izay noheveriny fa madio ihany no niraisan-databatra (Mar. 6:37–44; 8:1–9).
Ity farany ity no anjarantsika eto. Ny hafatra izay tian’i Jesosy ampitaina eto dia izao: Voalohany: “tsy maloto vokatry ny fiampikasohana na fiaraha-mihinana tamin’izay noheverin’ny fiarahamonina fa maloto Izy fa manadio izany kosa”. Faharoa, ny vahoaky ny Fanjakan’Andriamanitra dia tsy mba ny endrika ivelany no mampadio azy ary hanavahany izay any ivelany ho olona maloto (boka, kilemaina, Jentilisa, sns…) fa izay ao anatiny kosa dia ny fony izany. Noho izany, ny madio am-po rehetra, noho ny maha vahoaky ny Fanjakan’Andriamanitra azy, dia afaka miombom-piainana ao amin’ny fiaraha-misakafo, na mandringa, na jamba, na kilemaina, na Jentilisa, na lehilahy, na vehivavy.
Manaraka izany, ny fiaraha-misakafo dia nandrafitra ny saranga samihafa teo amin’ny fiarahamonina: tsy miara-misakafo amin’ny andevo ny andriana sns. Tsy miara-misakafo amin’ny vehivavy ny lehilahy, indrindra ny raim-pianakaviana. Tsy mba toy izany ny Fanjakan’Andriamanitra: tsy mba Fanjakana hisian’ny fanavakavahana ny Fanjakan’Andriamanitra, Fanjakana mampiray ny tsy mitovy saranga rehetra araka ny fanasokajian’ny fiarahamonin’izao tontolo izao azy.
Aoka ho fiainan’ny Fiangonana koa izany amin’izao vanin-taom-piangonana izay diaviny izao, ary izany no tokony hijoroany ho vavolombelon’ny efa nandraisany ny fanadiovan’ny ran’i Jesosy Kristy azy ireo teo ambony hazofijaliana. Izany no toetra tadiavin’Andriamanitra aminy ka hitsenany izay maharitra hatramin’ny farany amin’izany hoe “midira amin’ny fahafenoan’ny fifalian’ny Tomponao.”
Voninahitra anie ho an’Andriamanitra Ray sy Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen!